Iindaba - Zeziphi iindawo ezilula zokufunda isiTshayina kunezinye iilwimi?
Abantu abaninzi bathi ukufunda isiTshayina kunzima. Ngapha koko, ayisiyiyo. Ukongeza kwinto yokuba abalinganiswa baseTshayina bafuna umthambo wokukhumbula, amaTshayina nawo alula xa kuthelekiswa nezinye iilwimi.
I-Chinese Pinyin imfutshane kwaye icacile, ibhalwe ngoonobumba besiLatin, kwaye inani lilinganiselwe. Emva kokufunda ii-initials ezingama-21 kunye nama-38 wokugqibela kunye neetoni ezi-4, igubungela phantse onke amagama.
Akukho lutshintsho lwe morphological kwisiTshayina. Umzekelo, izibizo ngesiRashiya zahlulwe ngobudoda, ubufazi kunye nokungathathi cala. Isibizo ngasinye sineendlela ezimbini, isinye nesininzi, kwaye kukho umahluko ezintandathu ezahlukeneyo kwisinye nakwisininzi, ngamanye amaxesha isibizo sineentlobo ezilishumi elinambini. Ngaba sele uqalile ukuvelana nabafundi abafunda isiRashiya? Akunjalo kuphela kwisiRashiya, kodwa nakwiibizo zesiFrentshi kunye nesiJamani, akukho tshintsho olunjalo kwisiTshayina.
Inkcazo yamanani abodwa kunye nobuninzi kwisiTshayina ilula. Ukongeza kokongeza "amadoda" kwizimelabizo zoqobo, ngokubanzi akukho sidingo sokugxininisa umba wamanani esininzi, kwaye uxhomekeke ngakumbi kuguqulo lwasimahla.
Ukulandelelana kwegama lesiTshayina kubaluleke kakhulu kwaye kulungisiwe. Akukho mahluko “kwelityala”, kodwa kwiilwimi ezininzi, zininzi iinguqu kwi "zecala", kwaye kukwakho nezichazi eziguqula loo nto. Iilwimi ezininzi kunye nesiTshayina Ngokuchasene noko, iodolo ayibalulekanga kangako.
IsiTshayina sahluke kakhulu kwezinye iilwimi "kudidi lwegrama". Le yeyona ndawo igxile kakhulu apho amaTshayina kulula ukuwafunda!